Ny indostrian'ny fametrahana vokatra mitombo | Martech Zone
Ny indostrian'ny fametrahana vokatra mitombo
Alahady, Novambra 20, 2011 Alahady, Novambra 20, 2011 Douglas Karr
Ny vokatra Apple dia niseho tamin'ny 30% tamin'ireo horonantsary ambony 33 tamin'ny 2010. Nike, Chevy ary Ford tamin'ny 24%. Sony, Dell, Land Rover ary Glock amin'ny 15%. Orinasa 25 miliara dolara izao ny Product Placement. Raha ny marina, ny sarimihetsika James Bond manaraka dia hanarona ny iray ampahatelon'ny tetibolany miaraka amin'ny vola miditra amin'ny 45 tapitrisa dolara.
Pontiac dia nanantena ny hivarotra solstice 1,000 10 ao anatin'ny 1,000 andro. Raha ny tokony ho izy dia nivarotra solstice 41 XNUMX tao anatin'ny XNUMX minitra taorian'ny fiparitahana tao amin'ny The Apprentice.
Rehefa mihombo ny fanoherana ny mpanjifa na tsy miraharaha ny dokam-barotra fotsiny, dia mahazo vahana ny paikady toy ny fametrahana ny vokatra. Mifanaraka amin'ny indostrian'ny sarimihetsika dia ny fanohanana amin'ny indostrian'ny atiny. Rehefa manangana fahefana sy mampitombo ny mpihaino azy ny mpamorona atiny, manangana ny fotoana ahafahana mampitombo ny vola miditra amin'ny alàlan'ny fanohana. Martech Zone tsy misy hafa amin'izany… Zoomerang ary Delivra dia zava-dehibe tokoa amin'ny fahaizantsika manohy mampiroborobo sy mampiditra vola any Martech. (Izahay koa mitady mpanohana fanampiny, raha liana ianao).
Ny fahasamihafana hitako manokana dia ny lalàna federaly mifandraika amin'izy ireo. Na dia tsy maintsy manambara ampahibemaso ny fifandraisana tokana ananako ao anatin'ny atiny nosoratako aza aho, ny indostrian'ny sarimihetsika dia mitanisa info vitsivitsy fotsiny amin'ny faran'ny sarimihetsika. Tena mampisy fahasamihafana tokoa izany vola any Hollywood izany amin'ny politika!
Mila fotoana sy ezaka be ny fananganana mpanatrika. Ny mahita olona efa miaraka amin'io mpihaino io ary miara-miasa amin'izy ireo dia safidy tsara hafa. Miaraka amin'ity bilaogy ity dia tsy maintsy atao orinasa lehibe ny mpanohana antsika satria mitazona ny lazanay izy ireo ary mampidi-doza amin'ny mpihaino antsika rehefa mampiroborobo azy ireo. Tsy haiko fa mety hampidi-doza toy izany ny sarimihetsika! Ny sarimihetsika manafatra baomba dia tsy voatery hamela ny vokatra avoakan'izy ireo… ary ny vokatra ratsy dia tsy voatery hanala ilay sarimihetsika.
Via: Torohevitra MBA an-tserasera
Tags: fametrahana ny vokatra paomaet fametrahana ny vokatraHollywoodfametahana vokatra HollywoodSary torohayfametrahana ny vokatra fatorana jamesfametrahana ny sary mihetsikafametrahana ny vokatrafametrahana tantara tantara kilalao
Maharesy lahatra tsy azo ivalozana azo tsaroana
21 Novambra 2011 à 5:59
Ny fampifanarahana marika dia lehibe izao. Ny fametrahana vokatra dia nanampy tamin'izany, ary heveriko fa hitombo hatrany izany.